E-Stanton Guildhouse - I-Airbnb
Stanton, England, i-United Kingdom
I-Stanton Guildhouse yindlu ye-manor engu-2 efakiwe, enefenisha ephelele yekhishi elisha lesimanje namagumbi okugezela amasha angu-4.
•Ukufinyelela ku-Famous Cotswold Way kusuka e-The
Guildhouse • Amakilasi Ezobuciko Nezandla Ezizimele
• Ukugibela Amahhashi •
Umklomelo wokuwina i-Mount Inn pub, ukuhamba ngemizuzu engu-2 usuka e-The Guildhouse.
I-Guildhouse akuyona indawo yamaphathi.
Ngaphezulu kwedolobhana elihle lase-Stanton, e-South of Broadway, i-Cotswold Way idlula ngaphakathi kwamafidi ambalwa e-Stanton Guildhouse. Indlu ihlezi egqumeni ngenhla kwedolobhana, enokubukeka okuhle okubheke idolobhana elihle lase-Stanton kanye nesakhiwo sase-Evesham.
Ukugxila kwendlu, amamitha angu-75 sq nesitezi sayo sefulegi, i- inglenook hearth nesitofu sezinkuni esishisayo, ifenisha eyenziwe ngezandla kanye nokubukeka okubabazekayo. Kukhona nekhishi lesimanje elisanda kulungiswa eline-Aga enkulu.
I-Guildhouse ilala izivakashi ezingadluli kwezingu-15. Kunamakamelo okulala amabili angu-5, ikamelo elilodwa lomndeni elilala abantu abangu-4 kanye negumbi elilodwa elinendlu yokugezela. Kukhona namagumbi okugezela amasha angu-4 afakiwe. Indlu ihlanganisa i-wifi yamahhala.
I-Guildhouse ihlanganisa i-1 Wood Carving Studio, 1 Pottery Studio, 1 Freelance studio ehlanganisa i-WiFi, ibhodi elimhlophe kanye namashadi we-flip.
I-Stanton yidolobhana elincane, elithulile onqenqemeni lwe-Cotswold Hills escarpment eduze ne-Gloucestershire/umngcele we-Worcestershire e-England.
Njengoba kunomlando obuyele ezikhathini ze-Iron Age, i-Stanton iyidolobhana lobuhle nobuhle obungahleliwe obusaziwa kalula namuhla.
I-Stanton isogwini olusentshonalanga ye-Cotswold escarpment eduze ne-Broadway.
I-Cotswold Way iphinde idlule edolobhaneni.
Manager of Stanton Guildhouse
Noma yiziphi izinkinga sicela usishayele ucingo
Hlola ezinye izinketho ezise- Stanton namaphethelo